News – Page 25 – Yezin Agricultural University | Official Website
Announcement for Job
Seminar Invitation, Ma Soe Yu Nwe
Seminar Invitation Dear All of Professor, Head of Department, Teachers, Post graduate students and fourth year students from Yezin Agricultural University, You are cordially invited to attend the seminar of Ma Soe Yu Nwe, AGC – 97, with the topic “Effect of Cowdung Manure and Urea on Growth and Yield of Cabbage in Southern Shan...
8th Model ASEM – Application for Participation
Calling for Admission to Ph.D Program for YAU
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ပါရဂူ(Ph.D)သင်တန်းဝင်ခွင့်ကြေညာချက် ၁။ လုပ်ငန်းဌာနအသီးသီးမှ စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ရ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်တွင် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချမည့် ပါရဂူ(Ph.D)သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်တွင် ပါရဂူသင်တန်းအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အထူးပြုဘာသာရပ်များ သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၁။ Agronomy ၂။ Plant Breeding, Physiology& Ecology ၃။ Soil & Water Science ၄။ Plant Pathology ၅။ Entomology ၆။ Horticulture & Agricultural Biotechnology ၇။ Agricultural Economics ၃။ ပါရဂူသင်တန်းဝင်ခွင့်အတွက် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ (က) ...
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံ (M.Agr.Sc.) သင်တန်းဝင်ခွင့်ကြေညာချက် ၁။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်ဝက်တွင် ​ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချမည့် စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံ (M.Agr.Sc.) သင်တန်းသို့ လုပ်ငန်း/ဌာန အသီးသီးမှ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ (B.Agr.Sc.)နှင့် စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ (PostgradDipAgSc) ရရှိပြီးသည့် ဝန်ထမ်းများသည် ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ဝက်၌ စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံသင်တန်းကို အောက်ပါ အထူးပြု ဘာသာရပ်များကို လက်ခံသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၁။ Agronomy ၂။ Plant Breeding, Physiology& Ecology ၃။ Soil & Water Science ၄။ Plant Pathology ၅။...
Calling for Admission to Post Graduate Program for ACARE
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း ၁။ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် အဆင့်မြင့်စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနနှင့်ပညာရေးဗဟို ဌာန(ACARE) စီမံကိန်းဖြင့် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်နှင့် အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးသုတေသန တက္ကသိုလ်တို့ ပူးတွဲ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများတွင် သတ်မှတ် အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။ (က) မဟာသိပ္ပံသင်တန်း စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းကာလ (၁) စိုက်ပျိုးရေးဇီဝနည်းပညာဘာသာရပ် (Molecular Biology and Biotechnology) ၂ နှစ် (၂) ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာဘာသာရပ် (Post Harvest Technology) ၂ နှစ် (၃) အစားအစာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဘာသာရပ် (Food Science and Technology)...
Total Visit : 17064